Caawinta loo shaqeeyaha ee soo dhaweynta, isdhexgalka iyo horumarinta xirfadeed ee dadka naafada ah ee shirkadda
Waxaad tahay loo-shaqeeyaha hal ama in ka badan oo shaqaale naafada ah (ama qaaday tillaabooyin lagu aqoonsanayo iinta): Caawimadan waxay ujeedadeedu tahay inay ku hagto oo ku taageerto adiga iyo shaqaalahaaga si aad u gudataan waajibaadkooda iyo xirfadahooda horumarinta ee shirkaddaada.
Waa maxay taageerada soo dhaweynta, isdhexgalka iyo horumarinta xirfadeed ee dadka naafada ah?
Kaalmada waxaa lagu bixiyaa iyadoo lagu salaynayo qorshe hawleed kaas oo qeexaya tallaabooyinka aad dejisay shaqo-bixiye ahaan si loo sugo gudashada waajibaadka ama horumarinta xirfadeed ee shaqaalaha.
Waxay ujeedadeedu tahay inay fududayso:
soo dhawaynta iyo is dhexgalka qofka naafada ah ee dhawaan la qoray; taageerada jago cusub ee macnaha horumarinta xirfadeed iyo / ama dhaqdhaqaaqa iyo / ama ka dib isbeddelka goobta shaqada ama shuruudaha jimicsiga dhaqdhaqaaqa shaqaalaha naafada ah.Waa maxay kharashyada lagu bixiyo gargaarkan?
Gargaarkani wuxuu dabooli karaa kharashyada la xiriira:
Taageerada maareeyaha si loo tixgaliyo naafonimada, taageerada shakhsi ahaaneed ee qofka ama kormeeraha (waxbarid, tababarid, waqti tababar oo gaar ah), wacyigelin iyo/ama barnaamij tababar
Caawinta loo shaqeeyaha ee soo dhaweynta, isdhexgalka iyo horumarinta xirfadeed ee dadka naafada ah ee shirkadda 17-Abriil, 2022Tranquillus
READ Loo shaqeeyuhu ma yareyn karaa lacagta caymiska ee lagu bixiyay heshiiska wadajirka ah haddii uusan shaqaaluhu siin ogeysiis ku filan maqnaanshihiisa?
horeTaageerida shaqaalaha fasaxa jirada si looga fogaado burbur xirfadeed oo loogu diyaargaroobo soo laabashadooda
socdaTaageerada loo-shaqeeyaha ee shaqaalaha naafada ah
SANAD 2021 KA OO AY KU SAMAYSATAY XIRFADDA FULSHADA XAASIDKA AH